ထွေရာလေးပါး Archives — Hein Htet Kyaw
ထွေရာလေးပါး ဩဂုတ် 5, 2019
Website ကြီးဝယ်ပြီး ဘာမှ မရေးဖြစ်တာလဲ ကြာပြီ ဆိုတော့ Domain က နှမြောဖို့ကောင်းနေကောပဲ . . . ကွန်ပျူတာ တစ်လုံးမှာ အရေးကြီးတာကတော့ Window တစ်ခုတင်ဖို့က လူတိုင်းလိုလိုအတွက် အရေးကြီးတဲ့ အပိုင်း တစ်ခုလိုကို ဖြစ်နေပြန်တယ်ဆိုတာ ငြင်းလို့မရတော့ဘူး။ အခုနောက်ပိုင်းမှာ Window XP တွေ7တို့ Support ကို အပြည့်အဝမရတော့တဲ့အတွက် . . . Window 8 ကလဲ ကွန်ပျူတာတိုင်းနဲ့ အဆင်မပြေတဲ့အတွက်၊ Windows 10 က နောက်ဆုံး Version တိုင်းကို Update ရတဲ့ အတွက် xD ကျွန်တော် အကြိုက်ဆုံး Window ကိုပြောပါဆိုရင် Windows 10 ပဲဖြစ်လိမ့်မယ်။ နောက်ဆုံး Version တိုင်းကို Update ရသလို License Key ဆိုသည်မှာလဲ အခုအချိန်အထိ အဆင်ပြေနေသေးတဲ့အတွက် သုံးဖြစ်နေသေးတယ်လို့ပြောကမှာပေါ့။ Windows 10 သုံးရတဲ့ ရည်ရွယ်ချက်ကိုက Window Update လေးတွေကို…
ရေးချင်တာကိုရေးရတာ သဘောကျတယ်ဆိုပေမယ့် စောက်တောသားတွေက ဘာတွေရေးရေးတင်မှန်းမသိဘူးလို့ လာလာပြောတာကို ဖြေရှင်းရတာကိုတော့ မုန်းတယ် :3 အဓိက ကတော့ Facebook ပေါ်မှာ ရေးချင်တာရေးနေရတာကိုသဘောကျတာကိုပြောတာပေါ့လေ။ အခန်းထဲမှာ တစ်ယောက်ထဲ တစ်နေကုန် ဖြတ်သန်းနေရတဲ့ဘဝအတွက်ကတော့ Facebook ကို သူငယ်ချင်းလုပ်ပြီး…
အင်တာနက်လို့ပြောလိုက်တာနဲ့ လူတွေမြင်ကြတာက Facebook ပဲရှိတော့တာလားဆိုတာ မရေရာတော့ဘူး။ ဒီကြားထဲမှာ Telecom တွေဖြစ်ကြတဲ့ MPT, Ooredoo, Telenor တွေကလဲ Internet Package ထဲမှာ စျေးအနည်းဆုံးကတော့ Facebook ပဲဖြစ်နေတော့တာပဲ။ Internet ကိုဘာကြောင့်သုံးလဲ…
အခုတစ်လောမှာ နားထောင်အဖြစ်ဆုံးသီချင်းကိုပြောပါဆိုရင် Big Bag ရဲ့ “ သည်းခံ” ဆိုတဲ့သီချင်းပဲနေမှာ အကြိုက်ဆုံးဆိုလဲ အဲဒီသီချင်းပဲ မြန်မာနိုင်ငံမှာဖြစ်နေတဲ့အကြောင်းအရာ တော်တော်များများနဲ့ကလဲတိုက်ဆိုင်သလိုရှိနေတော့ ကြိုက်သွားတာလဲပါမှာပါလေ ကြိုက်တယ်မကြိုက်ဘူးဆိုတာထက်ကို အရာရာကို အရင်ကစိတ်နဲ့ဆိုရင် ပြန်ပြောမိနေပေမယ့် အခုတော့ အတော်လေး စိတ်လဲပျက်နေမိပြီ စိတ်ကုန်နေပြီဆို…
domain ကြီးဝယ် Hosting ကြီးလုထားပြီးတော့ ဘာမှ မရေးဖြစ်သေးရင်တော့ မကိုက်သေးဘူး ဆိုတော့ကာ ဟီးဟီး ဒီတစ်ခါ ပျင်းလို့ထရေးမယ့်အရာကတော့ ရုံးတိုင်းလိုလိုမှာ တွေ့နေရတဲ့ အသေးစား Virus လေးအကြောင်းကိုပေါ့ တစ်ခြား Virus တော့မဟုတ်ဘူး သူ့နာမည်က…